NepalManch :: दशैंमा मासु खाँदा के-के कुरामा ध्यान दिने ?
मासुलाई हामी नेपालीहरुले प्रतिष्ठित खानाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले दशैंमा अन्य बेलाको तुलनामा मासु बढी खपत हुने गर्छ। वर्ष दिनमा आउने चाडपर्वमा मासु टन्न खानु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।
दशैंमा बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म मासुका विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन छ । दशैंमा यस्तो अत्यधिक मासु खानाले स्वास्थ मानिस त बिरामी हुन्छ नै दिर्घ रोग भएका मानिसमाको स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर असर पुग्छ ।
मासुमा के पाइन्छ ?
मासु पौष्टिक दृष्टिकोणले पनि पोषिलो र मिठो खानाको परिकार हो । मासु प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । १०० ग्राम मासुमा लगभग २५ ग्राम प्रोटिन पाउनुका साथसाथै भिटामिन र मिनीरल पनि प्रशस्त मात्रमै पाइन्छ ।
मासुले मांसपेशी विकास गर्न मदर्त गर्छ । मासु आइरनको राम्रो स्रोत भएकाले शरीरमा भएको आइरनलाई साेस्न मदत गर्छ ।
मासुमा भिटामिन ‘ए’, ‘डी’, ‘ई’ र केही मात्रामा भिटामिन ‘बी’ र जिङ्क पाइउनुको साथै आइरन पनि पाइन्छ ।
आवश्यकभन्दा बढी मासु खाएमा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ भने सन्तुलन मिलाएर खाना सकेमा यसले स्वास्थ्यमा लाभ पुर्‍याउछ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि कस्तो प्रकारको मासु कति खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्दछ उच्च कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड र मुटुसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले मासु खाँदा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मासुसँग अन्य भिटामिन सी युक्त खानेकुरा जस्तै फलफुल सागसब्जीसँग मिसाएर खाँदा मासुबाट आउने फलामतत्व र पोषलाई साेस्न गर्न मदत गर्छ ।
मासु आफ्नो उमेर अनुसार सही मात्रा पुर्‍याएर खाने गर्नु पर्दछ ।
कस्ता व्यक्ति कति मासु खाने ?
वृद्ध तथा बिरामीहरुले रातो मासु खाँदा चिल्लोरहित मासु खानु पर्दछ । मुटुका बिरामी, गाउटका बिरामी, युरिक एसिडका बिरामीहरुले यस्तो मासु खादाथोरै मात्रा सन्तुलन मिलाएर खानु उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
मासुमा आइरन हुने भएकाले मासु सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुलाई शरीरमा रगतको पुर्ति गर्न मदत गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि हामीले आवश्यक मात्रामा अन्य सन्तुलन भोजनसँग मिलाएर मासुको सेवन गर्न सक्छौँ । हाम्रो शरीमा सुत्केकी, गर्भावस्थामा ६० देखि १०० ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ ।
चिल्लो र छालारहित मासुको सेवन हप्तामा एकदिन गर्न सकिन्छ । एउटा स्वस्थ वयष्क व्यक्तिलाई ६० देखि ७० ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ त्यही अनुसार आफूले शरीरिक क्रियाकलाप कति गरिन्छ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मासु खाने गर्नु पर्दछ ।
एउटा वयस्क व्यक्तिलाई हप्तामा एक दिन मासु खानु स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मान्न सकिन्छ ।
सहरमा बस्ने मानिसको त्यति शारीरिक कसरत नहुने हुदाँ मासु पचाउन गाह्रो हुन्छ र मोटोपन बढ्न गइ शरीरमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक समस्या उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैले मासुका साथमा विभिन्न रेसादार खानेकुरासँग मिलाएर खाने गर्नु पर्छ मासु खाएको बेला सागसब्जी र फलफुल प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नु पर्दछ ।
बच्चाहरु भनेको बढ्ने उमेरका भएकाले उनीहरुलाई प्रोटिन र आइरनको आवश्यक पर्दछ । बच्चालाई २५ देखी ३० ग्राम प्रोटिको आवश्यक हुन्छ । मासुले उनीहरुलाई वृद्धिविकासमा सहयोग गर्छ त्यसैले बच्चाहरुलाई पचाउँन सक्ने गरेर मासु खुवाउँन सकिन्छ ।
बाहिरबाट प्याक भएर आउने ससेज जस्ता मासुहरु खाँदा स्वास्थ्यका निम्ति राम्रो मान्न सकिँदैन । कुनै पनि खानेकुरा चाहिने भन्दा बढी खानु हुँदैन त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ ।
स्वास्थ्य जीवशैलीको निम्ति ताजा र सुरक्षित मासु खानु उपयुक्त हुन्छ । अत्याधिक मात्रामा मासु खानुभन्दा स्वास्थ्य भोजनमा मिसाएर सागसब्जी, गेडागुडी र फलफुल खादा उपयुक्त हुन्छ । प्रशेधित मासु र धेरै भुटेको मासु खाँदा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ त्यसैले सकभर त्यस्तो मासु नखाएकै राम्रो हुन्छ ।